Kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ site na iji njikọ Google Payment na Paypal | Site na Linux
Kpachara anya ma ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ na Google Pay iji ego Paypal gị
Paypal bụ usoro ịkwụ ụgwọ a ma ama n'ịntanetị na nnabata dị ukwuu n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile na mgbakwunye na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ dị ka Google Pay na-eme njikọ iji kwụọ ụgwọ na ego ndị achọtara na akaụntụ Paypal, nke n'aka nke ya, ọ bụrụ na a gụghị ya, na-ewe ego ahụ site na debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ ejikọtara.
Nke a nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya mgbe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na kaadị gị na ọ bụ ya, mana ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ n'ụzọ dị otu a iji gbochie plastik ha ka ha bụrụ cloned ma ọ bụ naanị n'ihi na ihe ha chọrọ ịkwụ ụgwọ nwere nke ahụ (na-abụkarị n'ịntanetị) .
Ma ọ dị ka nke a ọ kpatara nsogbu ka ukwuu na ọtụtụ ndị mmadụ amalitela ịkọ akụkọ na ha achọpụtala ịkwụ ụgwọ na-enwetaghị ikike na akaụntụ PayPal gị na nyiwe dị iche iche, dịka nzukọ PayPal ma ọ bụ Twitter, nke ha niile Akụkọ ndị ahụ jikọrọ ọnụ na ha niile jiri ntinye ego Google Pay na PayPal.
Kemgbe Fraịde a, Febụwarị 21, azụmahịa nke oge ụfọdụ gafere puku euro pụtara na akụkọ PayPal gị, dị ka a ga - asị na ha sitere na akaụntụ Google Pay.
Otu n'ime ndị ahụ metụtara na Twitter kwuru na ya achọpụtala ịzụrụ ọhụụ nke abụọ abụọ AirPods, maka ihe ruru $ 500. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịkagbu ịzụta. Atụmatụ mmebi ahụ dị ugbu a n'ime iri puku kwuru iri euro, dị ka akụkọ ọha si kwuo.
Dị ka Markus Fenske si kwuo, onye nyocha cybersecurity ya na utu aha "iblue" na Twitter, Ndị omekome ahụ mere ihe na-ezighi ezi na njikọ Google Payment na PayPal. Na Twitter, ọkachamara ahụ na-azọrọ na ya dọrọ ụlọ ọrụ aka na ntị maka ịdị adị nke na February 2019, mana otu ahụ emebeghị ya ihe kacha mkpa.
Mgbe ejikọtara akaụntụ PayPal na akaụntụ Google Pay, - PayPal na - emepụta mebere kredit kaadị, jiri akara kaadị nke gị, ụbọchị njedebe na CVV, ka Fenske na-ekwu.
«PayPal na-enye ohere ịkwụ ụgwọ kọntaktị site na Google Pay. Ọ bụrụ na ị mezie ya, ịnwere ike ịgụ nkọwa kaadị nke kredit kaadị mebere na ekwentị. Nyochaa achọghị ”, akwa ụta Markus Fenske.
Na ọnọdụ ndị a, hackers nwere ike ịnakọta data site na kaadị mebere. Ekele maka data a, onye na-agba ọsọ na-enweghị nsogbu ịzụrụ ihe na ụlọ ahịa na akaụntụ ya.
Ndị na-anata azụmahịa na-abụkarị ụlọ ahịa ndị a na-echebara echiche, nke edeputara na nkwuputa na udiri "Target T-". A Google search mata ọnọdụ nke ndị a dị iche iche na-echekwa pụtara ngwa ngwa.
Onye nyocha ahụ kwuru na ụzọ atọ onye nwakpo nwere ike nweta nkọwa nke mebere kaadị.
Nke mbụ, site n'ịgụ nkọwa kaadị na ekwentị onye ọrụ ma ọ bụ na ihuenyo. Nke abuo, site na malware na-ebunye ngwaọrụ onye ọrụ. N'ikpeazụ ịkọ ya.
Fenske kwuru, "Ọ ga - ekwe omume na onye mwakpo ahụ manyere nọmba kaadị na ụbọchị mmebi, nke dị na ihe dịka otu afọ," 'Nke a na - eme ka ọ bụrụ obere oghere nyocha. Na ịkọwapụta na "CVC adịghị mkpa", na-akọwa na "A nabatara ihe niile."
Ọbụna tupu e mebie nsogbu ahụ, ndị omekome ahụ mere edemede banyere mkpesa ndị ahụ na-ejizi oghere nchebe dị na PayPal. LNkatọ bụ na PayPal na-enye mmemme ụgwọ ọrụ njehie site na HackerOne, ma nke a bụ ezigbo facade.
Ndị edemede ahụ kwuru na ha kọọrọ ọtụtụ adịghị ike, mana nzaghachi PayPal bụ ihe ọ bụla ma nyere aka. Dịka ọmụmaatụ, otu ọdịiche ndị a kpọtụrụ aha na-enye gị ohere ịgafe 2FA, onye ọzọ na-enye gị ohere ịdebanye aha ekwentị ọhụrụ na-enweghị PIN.
Fenske kwenyere na nke ahụ ndị haraks ahụwo ụzọ iji chọpụta nkọwa nke "kaadị ndị mebere" na ha na-eji nkọwa kaadị maka azụmahịa na-enweghị ikike na ụlọ ahịa ndị America na German (ọtụtụ n'ime ndị ahụ metụtara nọ na Germany).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Kpachara anya ma ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ na Google Pay iji ego Paypal gị
Daalụ maka Ama ahụ!
Typesdị isiokwu ndị a na-amasị m, ihe ọmụma, gbasara nchekwa.
Delta Chat: Ngwa izipu ozi email nwere onwe na oghe
FSF na-ezube ịmalite koodu nchịkọta ọha na ikpo okwu na mmekorita